Johane Chitsauko 08:21-59. Jesu ndiMwari
» Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Johane Chitsauko 08:21-59. Jesu ndiMwari
Johane Chitsauko 08:21-59. Jesu ndiMwari
Johane 8:20 Wakataura mashoko awa pachivigiro chemari achidzidzisa mutembere; kwakanga kusinomunhu wakamubata, nokuti nguva yake yakanga isati yasvika.
Jesu aive muchivigiro chemari mutembere. Iyi yaive nzvimbo inotyisa kwazvo sezvo aive ambodzinga vaitsinhana mari mutembere. Asi vese vaimutya. Kutsamwa kwake pamusoro perudo rwavo nemari kwaibwinya mumaziso ake, vakaramba vari kure naye.
Nei Jesu akatsamwa kwazvo nevaitsinhana mari mutembere?
Akaona kuti munguva yaizouya mumakereke mazita aizovapo sezvimisikidzo zvemabhizimisi zvakarongeka.
Nekuti mumoyo yevaitsinhana mari vaive nemakaro ava, akaona mweya ‘webhizimisi guru’ wekereke yenguva yekupedzisira yeRaodikia. Vatungamiri vemakereke vaizopfuma kwazvo, asi munenge musina kugutsikana mavari. Kureruka kwekereke yekutanga kwaisazogona kutevedzerwa nekereke yeRaodikia, inoramba dzidziso dzeBhaibheri dzemaprofita nekuda kwerudo rwavo rwekuzviunganidzira pfuma.
Mudzidzi weBhaibheri, Dr. Richard Halverson akambotaura kuti, “MaGiriki pavakawana Evangeri, vakarishandura kuita firosofi; maRoma pavakawana Evangeri, vakarishandura kuita hurumende; vekuEurope pavakawana Evangeri, vakarishandura kuita tsika nechinyakare chavo. America payakawana Evangeri yakarishandura kuita Bhizimisi guru!"
Masangano ezvitendero akarongwa nevanhu haakoshese Mwari, sezvaanozviita iwo. Vanhu vanofa nenzara, apo vatungamiri vemakereke vazhinji vachiita mamiriyoni vaine zvinhu zvekurarama hupenyu hwepamusoro-soro pamwe nevakapfuma kwazvo.
"Mushakabvu Ron L. Hubbard wekereke yeScientology akambotaura kuti: “Kana muchida kuita mari munyika yanhasi, munofanira kutanga kereke.”
Kereke yeCatholic pasi rese ine hupfumi hwakawandisa, ine nzvimbo dzeminda dzakawandisa kudarika chero mamwe mapato ese pasi rese. Vatican ine mabhiriyoni emadhora ari mugoridhe riri mumasefa ayo, rakawanda racho rakachengetwa mumatura egoridhe ebhanga reFederal reU.S., mabhanga muEngland neSwitzerland akachengeta rimwe rese. Asi chingori chikamu chiduku chehupfumi hweVatican, huri muU.S. chete, hwakakura kudarika hupfumi hwemapoka mashanu akapfumisa acho munyika yese. Kereke iyi ine hupfumi hwakawandisa munezvezvivakwa, zvemidziyo, zvemari nezviwanikwa kudarika mamwe mapato ese, mabhanga, hurumende, kana nyika, zvichiita Pope, mutongi ari pamutemo wezvinhu izvi zvese, munhu akapfumisisa munhorondo yanhasi. Chokwadi kuunganidza hupfumi kwekereke yeCatholic kwakava kwepamusoro kwazvo kudarika zvingafungidzirwa. Hakuna angafungidzira kuti Pope anokosha zvakadii muzvikamu zvemabhiriyoni emadhora uye kereke pachayo nemano ayo inoisa midziyo yayo yakaitwa nemabasa emawoko pakukosha kwe Euro rimwechete, saka haifi yakatengeswa. Uye hairipi muripo wemutero kune chero nzvimbo.
Moyo wechitendero chemaJuda waive chinamato chemuTembere.
Pasi pehutungamiri hwechiJuda, nemakaro ehutungamiri hwevanhu, chivigiro chemaro ndicho chakava moyo wechinamato chemutembere. Muprista mukuru aive azvivakira nzvimbo. Chitendero chaive chava bhizimisi guru.
Muchivigiro chemari Jesu aive akunonongedzera mweya wekuzviunganidzira mari wevatungamiri vezvitendero, zvichireva kuti havaizofa vakawana, kana kutevera zvavo, nzira yechokwadi yaaifamba iye.
Mutambo wekutanga wePaseka wakaona Jesu achirasira panze vaya vaitsinhana mari mutembere.
Johane 2:14 Akawana mutembere vaitengesa mombe, namakwai nenjiva, nevaitsinhana mari vagere’mo.
Asi vatungamiri vezvitendero havana kuona njodzi yemakaro avo ekuda mari zhinji. Makaro emari munezvechitendero pamagomo aizobereka kuita kwekuti “Ndakafuma ndakafumiswa kandishaiwi chiro”.
Mweya wekuzviunganidzira zvinhu wenguva yatiri kurarama waizokura gore negore kuita rudo rwakaipa remweya wekutenga nekutengesa kuti vanhu vapemberere “kuzvarwa kwaKristu”, zvatisina kubvira takumbirwa neBhaibheri kuti tipemberere. Zvino chivigiro chemari muna Ndira akudaidzwa mazuva ano kuti Janyu – Wari.
Mapegani anofungei neizvi? Imharidzo ipi yazvinomiririra kwavari? Zvichibva pamaonero emucomiyunisiti wekuRussia anonzi Lenin,
“Kisimusi kuenderera mberi kwekapitarizimu nenzira dzezvechitendero”.
Bhizimisi guru uye chitendero waive musanganiswa waitsamwisa Jesu.
Saka pachinzvimbo chekurasira kure mari yavo votevera Jesu, vakasarudza kuchengeta mari yavo vouraya Jesu paPaseka yekupedzisira yaakaenda. Iyi yaive Paseka yake yechina kubva panguva yaakabapatidzwa.
Senzira iri muZvisimbiso kuna Zvakazarurwa Chitsauko 6 – pakazaruka Chisimbiso chechina.
Chisimbiso chekutanga chakaona bhiza jena rehunyengeri muzvitendero. Zvino bhiza dzvuku rekuuraya. Zvino bhiza dema remadhimoni paiiswa mari pachikero ichipimwa. Zvino rufu pabhiza rechina rakachenuruka.
Saka mari yakazarurira rufu mukova.
Vatungamiri vechitendero vechiJuda vakaita chinhu chimwechete ichi.
Mateo 26:3 Zvino vaprista vakuru, navakuru vavanhu vakavungana muruvazhe rwomuprista mukuru, wainzi Kayafasi.
4 Vakarangana kuti vabate Jesu namano, vagomuvuraya.
Muprista mukuru aive nechinzvimbo chekuchengetedza. Vakaungana pamwechete kuti vauraye Shoko. Kwete kudzidza.
Johane 8:21 Zvino wakati zve kwavari: Ndinoenda, muchanditsvaka, mukafira muzvivi zvenyu; pandinoenda imi hamungaviyi’po.
Jesu, sezvo aive asina chivi, aizova mbudzi tema inotakura zvivi zvedu kuenda kunaDiaborosi mugomba regehena.
Johane paakamuona nguva yakazouya muchiratidzo zvaiita sekuti tsoka dzake dzaive dzafamba nemuvira remoto.
Zvakazarurwa 1:15 Tsoka dzake dzive dzakafanana nesafuri inopenya, inenge yakanatswa muvira;
Uyu waive mucherechedzo wekutongwa kwezvivi. Zvinoita sekuti moto wegehena ndewekupisa vatadzi. Kushaiwa chivi kwake kwakaita kuti agone kufamba pamusoro pevira achinorasira zvivi zvedu panaSatani asina kana kukuvara nawo. Asi vatungamiri vechiJuda pavaizofa vaizonotakura zvivi zvavo vega kuenda kugehena kuti vanoedza kunozvirasa, vaizonopiswa. Saka vaizofira muzvivi zvavo. Havaizogona kutevera tsoka dzaJesu. Hakuna mumwe aizogona kuita zvaakaita izvi.
Pavaizofa voona kuti vaive varashika, vaizodana muponesi kuti avaponese kubva kugehena. Asi Jesu aizova asiipo. Munofanira kumugamuchira nekumutevera muchiri vapenyu. Kana mafa, zvinenge zvisisagoneki. Kana mafa mweya unosiya muviri wenyu. Mweya hauna ropa. Saka ropa raJesu harigoni kuponesa mweya wemunhu akafa.
Johane 8:22 Zvino vaJuda vakati: uchazvivuraya kanhi zvaanoti: Pandinoenda, imi hamungavi’po
Zvino vatungamiri vechiJuda vaive varasika zvakazara. Vaiziva kuti vaironga kumuvuraya asi izvi kwavari zvakavabudira zvichiti aizozviuraya.
Johane 8:23 Akati kwavari: Imi muri vapasi ini ndiri wokumusoro; imi muri venyika ino, ini handizi wenyika ino.
Chinhu chekuti vaida kumuvuraya kuchengetedza zvido zvemoyo yavo zvenyika ino, zvaive simba ravo rezvechitendero pamusoro pevanhu nemari yavo yemuTembere, zvakaita kuti vazive kuti Satani aivakurudzira kubva pasi.
Jesu haatsvaki zvigaro nezvinzvimbo zvenyika ino. Aizotasva mbongoro achipinda muJerusarema saMambo. Hamungagoni kuzvininipisa kudarika apa.
Haana kubvira akumbira vanhu mari yavo, asi akapa vanhu zviuru zvishanu nezviuru zvina chekudya, mahara.
Mukadzi aive ashandisa mari yake yese achirapwa nanachiremba vaive vatoita kuti awedzere, akarapwa kubva kuchirwere cheropa mahara. Saka Jesu haana kuita mari kubva pakuponesa kwake kunoshamisa.
Saka zvinangwa zvake zvaive zvisiri zvenyika ino zvachose. Izvi zvaibuditsa pachena kuti aifanira kuva achibva kumusoro sezvo aisatsvaka zvenyika ino.
Johane 8:24 Naizvozvo ndakati kwamuri: Muchafira muzvivi zvenyu, nokuti kana musinganditendi, kuti ndini iye, muchafira muzvivi zvenyu.
Chivi ndiko kusatenda.
Kana tisingatendi, tinenge tichitadza. Patinoita zvakaipa, zvinhu zvakaipa izvozvo ndizvo zvibereko zvekusatenda. Munhu anouraya anoita izvozvo nekuti haatendi. Kusatenda mupfungwa kunokonzeresa kuti mawoko aite zvakaipa.
Mushonga wekusatenda kutenda munaJesu Kristu neBhaibheri. Kana tikatenda zvakazara, chivi kana kusatenda zvinobviswa kubva mupfungwa dzedu, kuita kwedu kwobva pakutadza.
Vakuru vezvitendero zvechiJuda vaive vasingadi kutenda munaJesu.
Mwari akazvizivisa kuna Mosesi achiti “NDINI IYE”
Eksodo 3:14 Mwari akati kuna Mosesi: NICHAVA IYE WANDICHAVA. Akati: Undoti kuvana vaIsraeri: NDICHAVA ndiye wakandituma kwamuri.
Jesu akati kwavari, “kana musinganditendi, kuti ndini iye, muchafira muzvivi zvenyu”.
“Ndini iye” Zvinoreva kuti Jesu ndiMwari.
Zvaive kuita kana kuparadza kuvatungamiri vechiJuda. Kugamuchira Jesu saMwari, kana kufa muzvivi zvavo nekusatenda kwavo. Zvivi zvavo kwaive kuramba kwavo kutenda muna Jesu. Saka vaive vananga kwakaipa kare.
Kumberi vaizoita chinhu chakaipa kwazvo chekumuuraya. Kuita uku kwaingove zvibereko zvekusatenda kwavo. Chivi chavo chaicho kwaive kusatenda kwakavaita kuti vasvike pakuroverera Messiasi wavo vasina kufunga kaviri.
Johane 8:25 Zvino vakati kwaari: Iwe ndiwe aniko? Jesu akati kwavari: izvo zvandinongoramba ndichikuudzai kubva pakutanga.
Vaiona kuti aitaura kuti aive Mwari nekushandisa kwaaiita kutaura kwekuti “Ndini iye”.
Zvino vakamutongesa. Dai akataura zviri pachena kuti “Ndini Mwari” vaizomupomera kumhura Mwari vowana chikonzero chavo chekumuuraya. Akadavira zvakachenjera kuti aive waaive avaudza kare kuti ndiye ani.
Jesu paakabvunza Petro kuti aive ani, Petro akapindura akati
Mateo 16:16 Ipapo Simoni Petro akapindura, akati: Ndimi Kristu Mwanakomana waMwari Mupenyu.
Jesu haana kuudza Petro kuti Iye aive ani. Aida kuti Petro abvume ega pachake, kwete nekuti aive audzwa.
Pane musiyano mukuru pakati pekudzokorora chokwadi sezvinoita shiri yeparoti nekuti mumwe munhu ataura izvozvo, nekuzvionera chokwadi pachenyu nekuti munenge manzwisisa.
Jesu aida kuti vatungamiri vechiJuda vazvionere vega, pachavo, kuti Iye aive ani. Asi vaitya kwazvo kuita saizvozvo. Zvaizovatorera zvinzvimbo zvavo uye mari dzavo.
Johane 8:26 Ndine zvizhinji zvandinoda kureva nokutonga pamusoro penyu; asi wakandituma ndowozvokwadi; izvo zvandakanzwa kwaari ndizvo zvandinoudza nyika.
Jesu akabva avarwadzisa. Messiasi ndiye Emanueri – Mwari unesu.
Mwana ndiMwari waMasimbaose, Baba vokusingaperi.
Isaya 9:6 Nokuti takazvarirwa Mwana, takapiwa Mwanakomana; umambo huchava pafudzi rake; zita rake richanzi, "Anoshamisa, Gota, Mwari ane simba, Baba vokusingaperi, Muchinda worugare."
Izvi zvinogoneka chete kana Mweya mukuru waMwari wagara muMunhu uyu.
VAKORORE 2:9 Nokuti kuzara kwovuMwari kunogara maari pamuviri
Jesu, Munhu, akaterera kuMweya waMwari unoshamisa waive mukati make.
Johane 8:27 Asi havana kunzwisisa kuti unovavudza zvaBaba.
Johane 14:10 ... asi Baba, vanogara mandiri, ndivo vanoita mabasa avo.
Johane 8:28 Naizvozvo Jesu akati: Kana masimudza Mwanakomana womunhu, ipapo muchaziva kuti ndini iye, vuye kuti ini handiiti chinhu ndimene, asi ndinoreva I zvozvo zvandakadzidziswa naBaba
MaJuda pavaizoroverera Jesu, vaizoziva kuti aive Ani.
Paakafa, chidzitiro cheTembere chakabvaruka napakati. Mwari aive abuda muTembere. Urwu rwaive rwusiri rufu rwatajaira. Maawa matatu erima risina kufanira. Kudengenyeka kwenyika, nekumuka kwake kubva kuvakafa achibuda mubwiro rakapfigwa uye raive rakarindwa. Ipapo chitendero chitsva chizere minana nezvishamiso chakabva chatanga.
Vatungamiri vezvitendero muTembere vakaona kuti pane zvaive zvavaipira kwazvo. Zvino, muna AD 70, mauto eRoma achitungamirirwa nemukuru wemauto Tito vakaparadza Tembere vakaparadzira maJuda.
Basa revaFarise nevaSeduse, nevaPrista rakabva rashaiwa basa sezvo vanaRabi vakabva vatanga kutonga muchitendero chechiJuda chaive chapararira.
VaFarise vaSeduse, nevaPrista vakauraya Jesu kuti vachengetedze zvinzvimbo zvavo. Asi nekumuuraya vakabva vazviparadzira zvinzvimbo zvavo ivo apo Roma yakauraya maJuda anodarika miriyoni muna AD 70.
Johane 8:29 Wakandituma uneni. Haana kundisiya ndiri ndoga; nokuti ini ndinoita nguva dzose zvinomufadza.
Mweya waMwari Baba waigara muna Jesu. Bhaibheri harina kubvira rataura pamusoro pa “Mwari Mwanakomana” nekuti Mwari Mweya, kwete Munhu. Saka Jesu aive Munhu akarurama maari maigara Mweya waMwari. Munhu Jesu aive asiri Mwari. Jesu aive Mwari nekuti Mweya waMwari waive Maari. Imi muri zvese zviri mamuri.
Munokwanisa chete kuva mwana waMwari kana mugove weMweya waMwari uchigara mamuri.
Johane 8:30 Wakati areva izvozvo, vazhinji vakatenda kwaari.
Johane 8:31 Zvino Jesu wakati kuvaJudha avo, vakanga vamutenda: Kana imi muchigara mushoko rangu, muri vadzidzi vangu zvirokwazvo,
Jesu ndiye Shoko raMwari. Uye kuchagarowanikwa vaya vanosiya mapato ezvechitendero vachitenda muShoko raMwari zvakazara.
Nekutenda chete muBhaibheri nekutevera Magwaro ndipo patinokwanisa kuva vadzizi vaJesu.
Johane 8:32 Muchaziva zvokwadi, nezvokwadi ichakusunungurai.
Kana tikatenda muMagwaro akanyorwa, anova ndiwo chokwadi, Mwari ndiye anenge anechekuita nezvatinotaura nekuti tinenge tichitaura Shoko rake. Tinenge takasunungurwa kubva pakubata kwakaipa kwezvatinotaura, nekuti anenge ari mashoko ake.
Kutaura Shoko chete, uye zvimwe zvese zvinozoitika zvinozoitikira zvakanaka.
Johane 8:33 Vakamupindura, vakati: Tiri vorudzi rwaAbhurahamu isu, hatina kutongova varanda vomunhu; zvino iwe ungareva seiko kuti muchasunungurwa?
Sezvinotaurwa neveRoman Catholic kuti vane chokwadi nekuti vananaPope vavo vavanofungira kuti vakabva kuna Petro. Asi Petro aive murume akaroora, vanaPope havatenderwe kuroora. Pope chaiye wekutanga aive Pope Leo I akabata kubva muna 440-461 AD. Mabhishopu ese eRoma akavapo iye asati abata aive asingaonekwe semaPope, kana vatongi vakuru vemakereke ese.
Hakuna Pope akabvira abapatidza nenzira yakashandiswa naPetro.
MABASA 2:38 Petro akati kwavari: Tendevukai, mumwe nomumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene.
Saka makore ese anoda kukwana 1600 ekutsiviwa kwemaPope akakonzeresa kereke yeCatholic kuti ibve padzidziso nemienzaniso yekutanga yedzidziso dza Petro.
Zvakafananawo nenaJuda, nekutaura kuti vaive chikamu cherudzi rwaAbrahama, vakafunga kuti vaive vatori vasanangurwa vaMwari. Saka vaiti havasi muhunhapwa hwechero mumwe munhu.
Asi vaive nhapwa pamweya kumuprista mukuru mutembere nehuwori hwese hwevaiita muchivigiro chemari muTembere. Uyezve miko yavainzi vatevere nevatungamiri vechiJuda yavaive vawedzera pamirairo yaMosesi. Hunhapwa chaihwo hwavaifuratira hwaive hwekuti Hushe hweRoma hwaive hwavakurura, kwaivatonga, kuvaripisa mari dzemutero, nekuvaudza zvavaikwanisa kuita nekusaita. Saka vaive kure kwazvo nerusununguko.
Asi hunhapwa hwavo hukuru kwaive kusatenda.
Johane 8:34 Jesu akapindura, akati; Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Mumwe nomumwe unoita zvivi, ndiye muranda wezvivi.
Zvinzvimbo zvavo zvevaFarise nevaSeduse zvaive zvinzvimbo zvakaitwa nevanhu zvaive zvisimo mumurairo waMosesi. Vaive vazviitira zvitendero zvavo zvekutevera, chaive chivi chaicho. Kana mukatevera Mwari, hamugadziri mazano enyuwo mega.
Johane 8:35 Muranda haagari mumba nokusingaperi; mwanakomana ndiye unogara nokusingaperi.
Chivi nevaranda vezvivi zvinhu zvenguva duku.
Tembere nekusatenda kwayo kwese zvaizoparadzwa makore 37 aizotevera. VaFarise nevaSeduse vaizofa vanaRabi votora nzvimbo pamusoro pekutenda kwevanhu vechiJuda vaive vakapararira nenzvimbo dzese.
Asi Mwanakomana waMwari, Jesu Kristu, aizova pakati pekereke yake mukati menguva nomwe dzemakereke dzaizotora makore 2000. vatungamiri vechiJuda vaingova varanda vaMwari vairamba Mwanakomana waMwari. Sarudzo yakaipa kwazvo kurutivi rwavo.
Johane 8:36 Naizvozvo kana Mwanakomana achikusunungurai, muchava vakasununguka kwazvo.
Kuzvarwa patsva muMweya waMwari kunotisunungura kubva pakusatenda kuBhaibheri. Kuva naKristu matiri kunotisunungura kubva pakufunganya pamusoro pehupenyu huno sezvo ingori nzvimbo yatiri kudzidziswa kuti tive vakagadzirira kuti tipinde mumusha wedu unouya.
Mweya waKristu unogara matiri, unotiita kuti tide kurarama hupenyu hutsvene, inova nzira imwechete yega yatinosunungurwa kubva kuzvivi.
Johane 8:37 Ndinoziva kuti muri rudzi rwaAbrahama; asi munotsvaka kundivuraya, nokuti shoko rangu hariendeki mukati menyu.
Panyama, maJuda vana vakabva parudzi rwaAbrahama. Asi rudo rwavo rwekuvuraya Messiasi wavo wavakavimbiswa rwaireva kuti Shoko raMwari raive risina nzvimbo mumoyo yavo. Kutenda Shoko raMwari ndiko kunoverengwa.
Johane 8:38 Ini ndinoreva izvo zvandakanzwa kunaBaba vangu; imi munoita izvo zvamakanzwa kunababa venyu.
Jesu akakurudzirwa kuzadzisa Magwaro. Kuzadzisa Magwaro kunokuisai munzvimbo yaMwari.
MaJuda akakurudzirwa kuramba Magwaro aitaura pamusoro paMessiasi. Kufuratira, kushandura, kana kurwisa Magwaro kunokuisai munzvimbo yaSatani.
Johane 8:39 Vakapindura, vakati kwaari: Baba vedu ndiAbrahama. Jesu akati kwavari: Dai maiva vana vaAbrahama, maiita mabasa aAbrahama.
Vatungamiri vechiJuda vakataura kuti vaibva kurudzi rwaAbrahama. Izvozvo, kwavari, zvaiburitsa pachena kuti vaive vakanaka pamberi paMwari. Kusatora Jesu saMessiasi muzvikamu zveMagwaro zvaakazadzisa hwaive humbowo hwekuti vaive vasiri pakanaka naMwari. Asi vakakundikana kuona izvi. Kana tichitadza kuona panozadziswa Magwaro, tinenge tisiri vana vaMwari.
Johane 8:40 Asi zvino munotsvaka kundivuraya, ini munhu wakakuvudzai zvokwadi, yandakanzwa kunaMwari. Abrahama haana kuita izvozvo.
Asi Jesu akati Abrahama haana kubvira ada kuuraya munhu aitaura chokwadi. Kuramba kuzadziswa kweMagwaro kwakaitwa naJesu nesimba rake rinoshamisa kwaireva kuti vaitenda munaSatani, kwete Mwari.
1 Johane 3:12 Tisingaiti saKaini, wakanga ari wowakaipa, akavuraya munununa wake.
Izvi zvinoreva kuti, “Kwete saKaini, AKABEREKWA newakaipa”.
Kaini aive mwana wemhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka, aida kuuraya munun’una wake. Zvaive zvakafanana nemaJuda aida kuuraya Jesu.
Mufananidzo wemukushi waive nembeu (Shoko raMwari) dzichidonhera pavhu rakaoma (moyo yevanhu isina kunzwisisa kwemweya) dzikadyiwa neshiri (Satani nemweya yake yakaipa zvinoita kuti munhu arambe Magwaro).
Mateo 13:18 Naizvozvo imi inzwai mufananidzo womukushi.
Wakaipa ndiye munhu anokurudzirwa naDiaborosi.
Johane 8:41 Imi munoita mabasa ababa venyu, Vakati kwaari: Hatina kuberekwa novupombwe; tinababa vamwe, iye Mwari.
Kaini, muBhaibheri, aive asina munhu aive baba vake. Eva akataura kuti akabva kuna Mwari, izvi ndezvechokwadi nekuti hupenyu hwese hunobva kuna Mwari. Eva haana kuti Kaini akabva kuna Adamu.
Eva akadaidzwa kuti amai vavose vanorarama, Adamu haana kubvira adaidzwa kuti baba vavose vanorarama.
Eva aive nemimba yaKaini paakatarisana naMwari achitaura kuti:
Genesisi 3:16 Kumukadzi akati, "Ndichawanza zvikuru kurwadziwa kwako nokutora mi­mba kwako,
Mwari aisakwanisa kumuranga nekuda kwekuti aive atora mimba kubva kumurume wake. Asi kubata kwakaita mimba yaKaini kwaive kusina kubva kumurume wake.
Mukadzi aifanira kupa chibereko chemhandara kuti chibereke Jesu anoberekwa nemhandara. Aizokura, odaidza vatsvene vake vose kubva muguruva renyika.
Eva akatendera mhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka kuzivana naye. Saka mhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka yakaputsa humhandara hwake ikadeura ropa. Ndiko kutanga kwakaita chivi. Saka Mwari akagamuchira ropa remhuka rakadeurwa kuti riripire zvivi.
Genesisi 4:1 Zvino Adamu wakaziva mukadzi wake Eva; iye ndokutora mimba, akapona Kaini, akati, "Ndawana munhu, ndichibatsirwa naJEHOVA."
2 Akazopo­nazve munun’una wake Abero
Paive nemimba imwechete chete pakati paAdamu naEva, asi vanakomana vaviri vakaberekwa. Nekuti Eva aive abata mimba kare kubva kumhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka paakatarisana naMwari.
Zvirevo 30:20 Ndizvo zvakaita kufamba kwomukadzi woupombwe; Anodya, ndokupisika muromo wake, Achiti, "Handina kuita chinhu chakaipa."
Eva akaita hupombwe akaedza kuti aive asina chakaipa chaaive aita achiti aive awana Mwana kubva kuna Mwari. Mwari ndiye anopa hupenyu hwese. Asi haana kubvira aedza kutaura kuti mwana wake wekutanga akanga abva kuna Adamu.
Kana mukabata mimba nekusangana pabonde dumbu ndiro rinokura. Saka kudya kunokwanisa kushandiswa semucherechedzo wekusangana pabonde kana kuzivana kwemukadzi nemurume.
Satani akakurudzira mhuka yakatukwa ikazoshanduka kuita nyoka, mhuka yaive namano kwazvo kana yaive yakangwarisa yaive pakati pemunhu nezvipfuyo, ikanyengera mukadzi kuti aparadze zano raMwari.
Pachinzvimbo chekubereka ari mhandara, Eva akazivisa hupenyu nebonde.
Saka vanhu vose vakaberekwa nenzira isiri iyo (nebonde) mukutendera kwaMwari. Kwete mukuda kwaMwari kwakarurama, kunova kubereka kwemhandara.
Mapisarema 51:5 Tarirai, ndakaberekerwa muzvakaipa; Mai vangu vakandigamuchira muzvivi.
Kunyange akaberekwa nevabereki vake vakaroorana, Davidi akanga angoberekerwa muzvivi.
Kubereka kwemhandara ndiko chete kuda kwaMwari kwakarurama.
Kuramba, kufuratira, kushandura, uye kurwisa Magwaro ndiro raive zano guru raishandiswa nevadzidzi vaSatani kubvira pakutanga. Vanhu vanoita izvozvo vana vaDiaborosi.
Vanhu vanotenda kuBhaibheri nekuriterera ndivo vana vaMwari.
Nekuramba Jesu nekuda kumuuraya, vatungamiri vechiJuda vakaratidza kuti vaive vana vababa vavo Diaborosi.
Vanhu vose, vakaberekwa nekusangana pabonde, vari kunze kwekuda kwaMwari kwakarurama. Zvinosanganisa vatungamiri vechitendero chechiJuda. Vaifunga kuti vaive vakarurama nekuti vaive vari vedzinza raAbrahama. Zvino vakazoona kuti kuberekwa nekusangana pabonde chaive chiitiko chaikurudzirwa nemhuka yakazotukwa ikashanduka kuita nyoka yaive yakapfekwa naSatani.
Saka vakabva vatsiva panaJesu nekumutuka kuti aive mwana wehupombwe. Nekutaura kuti, sezvakaitwa naEva panaKaini, vaive vaberekwa naMwari.
Kuberekwa kwaJesu chaive chiitiko chaive chisina kugadikika mupfungwa dzavo.
SaMessiasi, aifanira kuva mimba yeMweya Mutsvene.
Mateo 1:20 Zvino wakati acharangarira izvozvo, tarira mutumwa washe akazviratidza kwaari pakurota akati, Josefa mwanakomana waDavidi, usatya kutora Maria, mukadzi wako, nokuti icho chakagamuchidzwa mukati make ndechoMweya Mutsvene.
Chero munhu anoisa mbeu yehupenyu mudumbu remukadzi ndiye baba vemwana anoberekwa ipapo.
Saka Mweya Mutsvene ndiwo Mwari Baba, sezvo Mwana wemunhu haagoni kuita madzibaba maviri. Saka Jesu ndiye ega anokwanisa kutaura kuti Mwari ndiye Baba vake.
Asi vatungamiri vechiJuda, vachishandiswa nekusatenda kwavo muMagwaro, vakaedza kutaura kuti Mwari ndiBaba vavo sezvo vaive vaberekwa zviri pamutemo nevabereki vavo. Vakataura izvi kuti vapomere Jesu kuti mimba yake yaive yabatwa “vabereki” vake vasati varoorana.
Maria aive aita chinhu chisina kujairika.
Paakabata mimba yaJesu, Maria akaenda kunoona Erisabeta hama yake, aive anemimba ine mwedzi mitanhatu akatakura Johane, akanogarako mwedzi mitatu naye. Johane asati azvarwa akadzoka akasvikoroorwa naJosefa. Aine mimba ine mwedzi mitatu pamuchato wake zvakaburitsa pachena kumunhu wese kuti Josefa aive asiri baba vaJesu. Izvi zvaive zvakakosha kuitira kuti vanhu vazive kuti Mweya Mutsvene waive wazadza Maria akabata mimba.
36 Vuye tarira, Erisabete, hama yako, naiye wavanemimbavo yomwanakomana pakuchembera kwake; mwedzi uno wava wechitanhatu kunaiye wainzi haabereki.
37 Nokuti kuna Mwari hakuna chinhu chinokona.
38 Ipapo Maria akati: Tarirai, ndiri mushandiri waShe; ndiitirwe hangu sezvamataura, Mutumwa akabva kwaari.
39 Namazuva iwayo Maria akasimuka, akakurumidza kuenda kunyika yamakomo, kuguta reJudea;
40 Akapinda mumba maZakaria, akakwazisa Erisabete.
41 Zvino Erisabete wakati achinzwa kukwazisa kwaMaria, mwana akakwakuka mudumbu rake; ipapo Erisabete akazadzwa noMweya Mutsvene,
42 Akadana nenzwi guru, akati: Wakaropafadzwa iwe pakati pavakadzi, nechibereko chedumbu rako chakaropafadzwa!
Kubatwa kwemimba yaJesu nemhandara ndicho chaive chibereko chaicho chaidiwa naMwari pakutanga muEdeni.
Vatungamiri vechiJuda vaisarudza kutaura kuti Maria aive aita vufeve asati aroorwa nemunhu asingazivikanwe. Josefa aive munhu akarurama saka vanhu vakaziva kuti aive asina chekuita nemimba iyi.
Asi Johane Mubapatidzi aive mumvura dzedumbu ramai vake (mvura dzemimba dzakaputira mwana kuti achengetedzeke) apo Jesu, Shoko raMwari, rakauya kwaari riri muna mai vake Maria.
Shoko richiuya kumuprofita aive mumvura.
57 Zvino nguva yaErisabete yokuzvara kwake yakasvika; akabereka mwanakomana.
Johane asati azvarwa, Maria akasiya Erisabeta. Mvura dzedumbu dzaive dzava pedyo kuputsika ipapo mwana muprofita aizova asisiri mumvura. Saka Shoko rakabva kwaari.
Makore anoda kuita makumi matatu akazotevera Johane Mubapatidzi aive mumvura dzerwizi rweJorodani. Jesu seShoko raMwari akabva auya zvakare kumuprofita, aive zve mumvura, kuti abapatidzwe.
Kushambidza kwemvura paShoko zvinoreva kuti nzira dzedu dzinonatswa kana tichiterera Magwaro.
Uku kwaive kushambidzwa kweGwaiana rechibairo risati rauraiwa makore matatu nehafu aizotevera paCalvari.
2 Makoronike 4:6 Akaitawo midziyo yokusukira ine gumi, akaisa mishanu kurudyi nemishanu kuruboshwe, yokusukiramo; zvinhu zvezvipiriso, zvaipiswa, zvaisukirwamo; asi dziva rakanga riri ravapirisiti rokushambidziramo.
Kwaivewo kusukwa kwemuPrista Mukuru aizobuda mumvura achienda munhivi dzeJorodani, onozodzwa neMweya Mutsvene uchiburuka kubva kudenga seNjiva kunozorora pamusoro pake.
5 Utorewo hanzu, ugofukidza Aroni nguvo nejasi reefodhi, neefodhi, nehombodo yechipfuva; uye umusunge chiuno chake nebhanhire reefodhi rakarukwa nouchenjeri;
Mweya Mutsvene hauna kupinda muna Jesu – rungadai rwakaita rubapatidzo rweMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene wakaburuka ukazorora pamusoro pake sechizodzo.
Marko 1:11 Inzwi rikabva kudenga richiti, Ndiwe Mwanakomana wangu unodikamwa, wandinofarira.
Uyu aive Mwari Baba aitaura.
Munhu anoisa mbeu yehupenyu mudumbu remukadzi ndiye baba vemwana.
Mweya Mutsvene ndiwo wakadyara Mbeu yeMwana Jesu muna Maria. Mwana wenyama haagoni kuita madzibaba maviri. Saka Mweya Mutsvene ndiwo Mwari Baba.
Saka waive Mweya Mutsvene wakataura kuti, “Ndiwe Mwanakomana wangu unodikamwa,” pawakaburuka.
Mweya waMwari wakagara munaKristu pamuviri asi Mweya waMwari unokwanisawo, seMweya, kuzviratidza kune dzimwe nzvimbo kunze kwaKristu.
Nguvo kana jazi reMuprista Mukuru haifaniri kubvaruka zvachose.
Eksodo 28:30 Unofanira kuisawo muhombodo yechipfuva yokutonga Urimi neTumimi, kuti zvive pamoyo waAroni kana achipinda pamberi paJEHOVA; Aroni agotakura kutongwa kwavana vaIsiraeri pamoyo wake pamberi paJEHOVA nguva dzose.
31 "Unofanira kuita jasi reefodhi rose romucheka mutema.
32 Ngarive neburi rokupinza musoro pakati paro, rive nomupendero wakarukwa unopoteredza buri raro, sapaburi renguvo yokurwa, kuti irege kubvaruka.
Nguvo yokurwa ijazi rekudzivirira rinobva muhuro kusvika muchivuno.
Kefasi aive muPrista Mukuru wechiJuda, asi akabvarura jazi rake nehasha paakapomera Jesu.
Mateo 26:65 Ipapo muPirisita mukuru akabvarura nguvo dzake akati wamhura Mwari! Tichatsvakireiko zvapupu? Tarirai manzwa zvino kumhura kwake.
Nguvo yaJesu yakabvarurwa nemauto mana eRoma vaive vakamira vakapoteredza muchinjikwa. Izvi zvakamuita muPrista Mukuru wechokwadi.
Johane 19:23 Zvino varwi vakati varovera Jesu pamuchinjikwa, vakatora nguvo dzake, vakaita migove mina, murwi mumwe nomumwe mugove wake; nenguvo yapasi vo. Zvino nguvo iyi yakanga isina pakasonwa, asi yakanga yakarukwa yose kubva kumusoro kwayo.
24 Zvino vakataurirana, vachiti: Ngatirege kuibvarura, asi tikande mijenya pamusoro payo, tivone kuti ichava yani; kuti Rugwaro ruitike, runoti: Vakagovana nguvo dzangu pakati pavo. Vakakanda mijenya pamusoro pechokufuka changu. Ndizvo zvakaitwa navarwi.
Mwari akadavira kubvarurwa kwakaitwa nguvo yemuPrista Mukuru nekubvarura chidzitiro cheTembere kubva kumusoro kusvika pasi apo Mweya waMwari wakabva muTembere pakafa Jesu.
Nzvimbo Tsvene tsvene yaive chigaro chenyasha chemuTembere yemaJuda. Chigaro chitsva chenyasha chakabva chaita Jesu akaturikwa pamuchinjikwa.
MaRoma akarovera akauraya Jesu muna AD 33. Mweya waMwari wakabuda muna Jesu paakafa. Asi Mweya wakadzoka mumuviri waJesu paakamuka kubva kuvakafa.
Muna AD 70 mauto eRoma vari pasi pemukuru wemauto Tito vakaparadza Jerusarema vakaparadza zve Tembere yemaJuda zvakazara. Tembere yaive isisina Mweya waMwari munzvimbo Tsvene Tsvene. Saka pakaparadzwa Tembere, haina kuzovakwazve kana kumutswa.
Mateo 24:15 Naizvozvo kana muchivona nyangadzi yokuparadza yakarebwa nomuporofita Danieri imire panzvimbo tsvene (unorava ngaacherekedze).
MaRoma muna AD 70 vakaenda kuJerusarema. Dai maJuda vaida kutiza vaifanira kutiza nekukasika. MaRoma akavaka masvingo akapoteredza guta mumazuva mashoma shoma. MaJuda vaive vachiri muguta vakatapwamo. MaJuda anodarika miriyoni vakafa pakuparadzwa kweguta. Guta rakasiiwa raparadzwa, kunyanya Gomo reTembere apo paive pakambovakwa Tembere.
Roma ndiye muvengi wekereke wakare. Muna 705 AD mosiki yaOmar yakavakwa nemaMosiremu panzvimbo paive pakambovakwa Tembere. Saka maMosiremu anosanganiswa pamwechete neRoma senyangadzi inoparadza. Hondo yemarudzi yemuSiria yakatanga muna 2011 yakaparadza maguta eSiria kumaita matutu emavhu nemarara. Hondo yemarudzi yemuYemen yakakonzeresa matambudziko murudzi rwevanhu.
Johane 8:42 Jesu akati kwavari: Dai Mwari aiva baba venyu, maindida ini; nokuti ndakabuda, ndikabva kunaMwari. Nokuti handina kuzvivuyira ini ndimene, asi ndiye wakandituma.
Jesu aive nechinangwa chimwechete muhupenyu hwake chaive chisiri chekuita kuda kwake. Akauya kuzozadzisa Magwaro ese akataura pamusoro pake. Akatendera Mweya waMwari waigara maari kumuratidza nzira, nechero zvaaizosangana nazvo iye semunhu.
Johane 8:43 Hamunzwisisi seiko kutaura kwangu? Nokuti hamugoni kunzwa shoko rangu.
Vatungamiri vechiJuda havana kunzwisisa zvaaitaura nekuti havana kufananidza zvaaiita neMagwaro. Aitevera nzira yaizadzisa Magwaro. Vaifuratira Magwaro.
Johane 8:44 Imi muri vababa venyu Diaborosi munoda kuita kuda kwakaipa, kwababa venyu iye wakanga ari muvurai kubva pakutanga, haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamuna zvokwadi. Kana achireva nhema, unoreva zvake nokuti ndiye wenhema vuye baba vadzo.
Satani akakurudzira mhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka yaive mhuka yepamusoro pezvipfuyo zvese, kuti irare naEva ibereke Kaini. Nemimba yaKaini, Mwari akatuka Eva nevamwe vakadzi vese kuti varwadziwe pakuzvara vana.
Eva aive abata mimba paakamira pamberi paMwari. Aive ava nemimba yemhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka.
Mwari akatuka mhuka yakashandiswa naSatani kunyengera mukadzi akaiita nyoka kuti zvisaitike zvakare.
Genesisi 3:14 JEHOVA Mwari akati kunyoka, "Zvawaita izvozvo, watukwa kupfuura mhuka dzose dzesango; uchafamba nedu­mbu rako, uchadya guruva mazuva ose oupenyu hwako
Murango wemhuka yakashandiswa naSatani kunyengera Eva waive wekuitwa nyoka, saka yaizorarama hupenyu hwayo hwese ichifamba nedumbu. Nei? Nekuti mhuka yakanyengera Eva yakarara nedumbu rayo pamusoro paEva payakaita chivi.
Mbeu yemhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka. Sero rehurume hwemunhu rinoratidzika senyoka nemusoro waro nemuswe wakareba.
Mwana wekutanga akaberekwa nekusangana pabonde aive Kaini, munhu aive asina munhu aive baba vake. Vese vanoberekwa kupfurikidza bonde vanofanira kufa.
Zuva kunaMwari makore chiuru. Hakuna munhu akazvarwa nekusangana pabonde akararama chiuru chemakore. Metusera, munhu akachemberesa, akaita makore 969. Saka vatungamiri vechiJuda vaive varakarasika. Wese akazvarwa nekusangana pabonde, anofainira kufa panyama.
Nekusatenda muMagwaro akazadziswa naJesu zvaireva kuti vaifanira kufa pamweya zvakare.
Kana mbeu yemhuka yakafurira Eva ikatukwa ikashanduka kuita nyoka yaive munhu Kaini, murevi wenhema, uye muurayi, aive asina munhu aive baba vake, zvino mbeu yemukadzi aivewo Munhu aive asina munhu aive baba vake sezvo aive asina kubva paMweya Mutsvene.
Uyu aive Messiasi aive chipingaidzo chikuru kumaJuda nechimiro chezvitendero zvavo.
Mwari akasika Mwana mumimba maMaria. Mwana iyeye aive mbeu yakazara yakasikwa yaive isina munhu aive baba vake. Saka mbeu yaive yaMaria. Saka Jesu aive mbeu yemukadzi. (Tarirai mbeu yaive isina kubva hafu kuna Mwari hafu kuna Maria. Mbeu yaive yabva kuna Mwari yakazara. Maria aingovewo “mutakuri”.)
Mwanakomana akapiwa kurudzi rwevanhu naMwari paakasika Mwana mudumbu raMaria.
Asi Mwanakomana iyeye aive nekuzara kwehuMwari pamuviri maari. Mweya waMwari iwoyo waive maari waive Mwari Baba.
Humbowo hweizvi hwaive papi? Rugwaro rwakazadziswa naJesu nesimba rinoshamisa raakaratidza.
Kubva kuna Kaini (mbeu yekutanga yemhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka) zvichienda mberi, vaya vakatora kurudziro yavo kubva kuna Satani vanozogara vachiramba nekurwisa Magwaro pavadira. Rudzi rwevanhu zvakadaro runosarudza manyepo pachinzvimbo chechokwadi.
Saka maKristu mazhinji anotenda muKisimusi, zvisinei nekuti Bhaibheri harina kubvira rati tipemberere kuzvarwa kwaJesu. Zvino kuti vafudzi vave panze nemakwai pakati peusiku pakati penguva yechando zvaisagoneka. Jeremia Chitsauko 10 anotiudza kuti tisadzidze kubva kumarudzi evaHedeni pakushongedza muti nesirveri nendarama. Asi isu tinosarudza tsika dzevaHedeni pachinzvimbo chekuterera Bhaibheri.
Ndicho chikonzero nei tichitenda kuTiriniti, shoko risimo muBhaibheri, zvakangofanana nekuti “Munhu wechipiri muhuMwari” kana kuti “Mwari mumwe muVanhu vatatu”. Kana zvisiri muBhaibheri, tinozvitenda nehumbwende hwedu. Zvinotiita vatadzi chaivo. Pope, Kadhinari. Achibhishopu, Renti, masangano, Kisimusi, 25 Zvita, kuvaka makereke, zvese hazvimo muMagwaro.
Johane 8:45 Asi ini, ndinoreva zvokwadi, hamunditendi.
Asi mumwe munhu akatiudza chokwadi, hatigoni kutenda zvinotaura Bhaibheri. Takasukurudzwa pfungwa zvakanyanya netsika dzezvitendero uye makereke edu zvekuti tinotenda mazviri hupenyu hwedu hwese.
Ini, pachangu, pekutanga handina kutenda kuti vazivi vekumabvazuva vakapinda mumba. Izvi zvairwisana nemakore mazhinji andaiona mitambo yemadhirama eKisimusi apo vazivi vaive muchidyiro. Makadhi ese eKisimusi airatidzawo vazivi vari muchidyiro. Nekufamba kwenguva ndakazowanawo chokwadi chekuti makadhi eKisimusi haamo muMagwaro, uye kuratidzwa kunoitwa vazivi vari muchidyiro kwaive kusiri muMagwaro zvakare. Uku ndiko kwaive kumutswa kwangu kwekutanga pachinhu chekuti makereke aikanganisa.
Ndakatadza zve kutenda kuti mapostora akabapatidza neZita raJesu. Ndaive ndakaudzwa kuti vakatadza ipapo, uye kuti makereke anhasi aiziva zviri nani sezvo vaindidzidzisa kuti tinofanira kubapatidzwa muzita raBaba, Mwanakomana, naMweya Mutsvene nekuti Jesu aive ataura izvozvo. Pave paya ndipo pandakazoona kuti hapana aiziva kuti zita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene raive ani. Saka hatina zita raMwari wemitumbi mitatu. Uye Mwari wemitumbi mitatu aive chakavanzika chisina sangano rekereke kana muparidzi ainzwisisa nezvacho.
Asi Zvakazarurwa 10:7 rinoti mumazuva enzwi remutumwa wechinomwe, zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa. Saka Tiriniti isina zita inenge isiri mufananidzo wakanaka sezvo chakavanzika chinenge chiri tsoro inoda kugadziriswa.
Asi kana Jesu Kristu ari Mwari Wamasimbaose pamuviri, zvino Mwari anenge ari nezita remunhu – Jesu.
Rubapatidzo mucherechedzo wekufa kuvigwa nekumuka kwaJesu
4 Naizvozvo pakubapatidzwa takavigwa pamwe chete naye murufu; kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nokubwinya kwaBaba, saizvozvo nesu vo tifambe novupenyu bwutsva.
Patinenge tiri pasi pemvura hatigoni kufema, mucherechedzo wekuti tinenge tafa.
Baba naMweya Mutsvene havana kubvira vafa, uye havangavigwi. Saka kuvaita vanhu vakasiyana hazvirevi chinhu sezvo rubapatidzo rwemvura harugoni kuitwa pamweya.
Mwari Baba vaive Mwari Ishe pamusoro pemaJuda. Mweya Mutsvene waive Kristu, Akazodzwa.
Mabasa 2:36 Zvino imba yose yavaIsraeri ngaizive kwazvo, kuti uyu Jesu wamakarovera pamuchinjikwa, Mwari wakamuita Ishe naKristu.
Saka Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene zvinomiririra Ishe Jesu Kristu. Iri izita raMwari kubva paakaita munhu akagara mumuviri wemunhu.
Diaborosi akagara mumhuka yakazotukwa ikashanduka kuita nyoka uye munguruve paGedara. Mwari akaramba kugara mumhuka – asi muvanhu vakatendeuka chete.
Saka Tiriniti yeVanhu vatatu kudenga haisi mufananidzo wakanaka. Vanhu vatatu kudenga havagoni kuita vanhu vaviri panyika, Adamu naEva, semufananidzo wavo. Kunyanya sezvo Eva aive mukadzi.
Saka tinoda kubva “patsika dzechichechi-chechi” nedzidziso dzakaitwa nevanhu.
Johane 8:46 Ndianiko kwamuri unganditendisa kuti ndinezvivi? Kana ndichireva zvokwadi, munoregereiko kunditenda?
Hakuna munhu anogona kupomera Jesu chero chivi. Asi anotaura chokwadi, vatungamiri vechiJuda vakaramba kumutenda.
Tinodisa kwazvo dzidziso dzekereke. Tinoda mifungo yemakereke. Tinodisa kwazvo tsika dzemakereke.
Hatidi kutevera Magwaro zvakazara – kutaura zvakanyorwa muBhaibheri chete.
Johane 8:47 Uyo uri waMwari, unonzwa mashoko aMwari; imi hamunzwi nemhaka iyi, nokuti hamuzati muri vaMwari.
Humbowo hwega hwatinahwo hwekuti tiri vaMwari ndepatinotenda muShoko raMwari. Kana tichisarudza tsika dzekereke pachinzvimbo cheMagwaro, tinenge tisiri vaMwari.
Kana musina Zita rekudaidza Mwari wenyu weTiriniti, Dzidziso dzenyu dzinenge dzisingabvi muMagwaro nekuti Mwari ane Zita -- Jesu.
Johane 8:48 VaJuda vakapindura, vakati kwaari: Hatina kureva kwazvo here, tichiti: Uri muSamaria, unomweya wakaipa?
Izvi zvaipikisa chokwadi zvakazara.
MaJuda vaifanira kuripira vatungamiri vechitendero chechiJuda muTembere kuitira mabasa ese echitendero avaiita. MuSamaria akanaka haana kukumbira muripo parubatsiro rwake rwaakapa. Akabva atoripira kupona kwemunhu aive akakuvara.
Jesu haana kubvira akumbira kuripwa pazvese zvaakaita. Akaripira muripo wekutadza kwedu pamuchinjikwa nekuda kwake kuti tiponeswe tiregererwe zvivi zvedu. Jesu ndiye aive muSamaria akanaka mukuru pahunhu hwake, kunyange akanga asiri muSamaria zvachose pakuberekwa kwake.
VaAsiria, pavakapamba Samaria vakadzinga maJuda munyika iyoyo. Vaive vaunza mamwe maHedeni kuti vasvikogare muSamaria. Saka vanhu vakaroorana pakati pemaJuda nemaHedeni, vana vavo ndivo vakazozivikanwa nekunzi vaSamaria.
Jesu aive afamba kubva kuJerusarema kuenda kuKana. Paakamira kuti azorore paSikari, simba rake rekutsanangura ndangariro dzemukadzi muSamaria rakaita kuti Mukadzi muSamaria nevamwe vanhu vose vemuSamaria vamuzive kuti ndiye Messiasi.
Vatungamiriri vezvitendero zvechiJuda vakaramba kumuona saMessiasi wavo.
Saka vaSamaria vaive vari nani kwazvo pamweya kudarika maJuda. Asi vatungamiri vechiJuda vaiona maSamaria sevanhu vepazasi kwazvo.
Saka vatungamiri vezvitendero zvechiJuda vakapomera Jesu kuti aive muSamaria.
Mai vake Maria vaive muJuda, saka vaiti sezvo aive anemimba ine mwedzi mitatu paakachata, baba vake vaifanira kuva vari muHedeni aisazivikanwa.
Nei Maria akaita chinhu chakadaro? Nekudzoka kuzoroorwa naJosefa ave nemimba ine mwedzi mitatu, Maria akaburitsa pachena kuvanhu vose kuti Josefa aive asiri baba vaJesu. Izvi zvakasiya Jesu ari panjodzi yekupomerwa kunzi mwana wehupombwe.
Kwaive nemarudzi emadzinza maviri kubva kuna Davidi.
Mateo akatsanangura dzinza rehumambo rinobva kuna Soromoni. Munhu wekupedzisira akataurwa kubva padzinza iri aive Josefa, akaita baba vaJesu vekurera. Ruka akatsanangura rimwe dzinza rakabva kumukoma waSoromoni Natani. Nei dzinza rechipiri iri rakataurwa? Nekuti iri raive dzinza rainopedzisira naMaria.
Paive nedambudziko guru rimwechete nedzinza rinoenda nekunaSoromoni: Konia kana kuti Jekonia kana Jehoakimi (zvinosiyana pakunyorwa kwaro). Aive mambo akaipa kwazvo zvekuti Mwari akati hakuna mumwe kubva kudzinza rake aizova mambo. Saka Josefa aisakwanisa kuva mambo wemaJuda.
Jeremia 22:24 "Nohupenyu hwangu ndizvo zvinotaura JEHOVA kunyange Konia, mwanakomana waJehoiakimu, mambo waJuda, aiva chindori chokutsikisa nacho paruoko rwangu rworudyi, kunyange zvakadaro ndaikubvisa ipapo.
Jeremia 22:30 Zvanzi naJEHOVA, "Nyora kuti munhu uyu haana vana, munhu usingazofari pamazuva ake; nokuti hakuchina murume pakati pavana vake uchava nomufaro, uchagara pachigaro choushe chaDavidi, achibata ushe hwaJuda,"
Jesu, Mwanakomana waMaria, aive akasunungurwa kubva pakutukwa uku. Josefa akava baba vaJesu vekurera. Mwanakomana wekurera ane kodzero dzese dzakafanana nedzemwanakomana wekubereka. Saka Jesu akasunungurwa pakutukwa kwaKonia totenda dzinza raMaria, asi anokwanisa kuva mambo totenda dzinza raJosefa nekumugamuchira kuti ave mwanakomana wekurera.
Saka Maria aifanira kunonotsa muchato kuitira kuti aburtse pachena kuti Josefa aive asiri baba vaJesu. Saka vatungamiri vezvitendero zvechiJuda vaive netsananguro yakarasika zvachose.
Johane 8:49 Jesu akapindura, akati: Handino mweya wakaipa, asi ndinokudza baba vangu, zvino imi mondizvidza
Jesu aive asina wakaipa maari sezvaitaurwa nevatungamiri vemaJuda. Aifanira kuzvarwa nemhandara. Hakuna kubva kurudzi rwaKonia aikwanisa kuva baba vake. Kuberekwa nemhandara kwakaita kuti Mwari ave Baba vake.
Kuzadziswa kweMagwaro uye simba rake rinoshamisa zvakaratidza kuti Mwari aive akamuda, apo vatungamiri vezvitendero zvechiJuda vaimuramba.
Johane 8:50 Ini handitsvaki kuti ndikudzwe; uri’ko mumwe unozvitsvaka, achitonga.
Jesu aive akazvipira kufa kuti azadzise hushumiri hwake. Kukudzwa kwake kwaive kusina basa mundangariro dzake. Mwari Baba, aigara maari, ndiye aitsvaga zvaida kuitwa kuti azotonge zvinhu zvese nekuzadziswa kweMagwaro.
Johane 8:51 Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Kana munhu akachengeta shoko rangu, haatongovoni rufu.
Rufu chairwo ndirwo dziva remoto. Harina “nzira yekutiza moto nayo”.
Rufu rwekutanga ndiko kuparadzaniswa kwemweya nenyama kana miviri.
Jakobo 2:26 Nokuti somuviri usinomweya wakafa, saizvozvo kutenda kusinamabasa kwakafa vo.
Rufu rwechipiri ndiko kuparadzaniswa kwemweya wemukati kubva pamweya wehupenyu kana mweya wekufema pamagumo enguva yemunhu muDziva reMoto. Ndirwo rufu rwekupedzisira.
Mweya wemukati memunhu wakaputirwa muchisote chemweya wekufema, unova hupenyu.
1 Samueri 25:29 Mweya washe wangu ucharamba wakasungirwa pachisote chavapenyu
Rufu rwevanhu rwakafanana nekurara, nekuti tinoenda kunzvimbo iri nani kana taponeswa kupfurikidza kutenda mashoko aJesu.
Johane 8:52 VaJuda vakati kwaari: Tinoziva zvino kuti unomweya wakaipa; Abrahama wakafa, navaporofita vo; zvino iwe unoti: Kana munhu akachengeta shoko rangu, haangatongovoni rufu.
Vatungamiri vezvitendero zvechiJuda vakakoshesa kufa kwekutanga sekunge kwaipedza zvese. Asi vanhu vese vaiziva kuti Jesu aive ambomutsa vakafa. Izvi zvairatidza kuti rufu rwekutanga rwive rwusiri magumo emutendi.
Zvairatidzawo kuti Jesu aikwanisa kumutsa vakafa pazuva rekumuka kwake kubva kuvakafa.
Johane 8:53 Ko iwe uri mukuru kunaBaba vedu Abhurahamu, vakafa, kanhi navaporofita vakafa? Unozviita aniko?
Vakatuka Jesu nekuti akataura kuti aive mukuru kuna Abrahama nevaprofita. Havana kuziva kuti Jesu aizoburitsa vatsvene vose veTestamente Yekare kubva muParadiso kupfurikidza kumuka kwevakafa vari vatsvene muTestamente Yekare mumashure mekumuka kwake iye kubva kuvakafa.
Kumuka kwevatsvene veTestamente Yekare chaive chishamiso chikuru cheTestamente Yekare.
Johane 8:54 Jesu akapindura, akati: Kana ini ndichizvikudza, kuzvikudza kwangu hakuna maturo; unondikudza ndivo baba, avo vamunoti ndiMwari wenyu.
Jesu aiziva kuti kumuka kwake kubva kuvakafa kwaizokudza hushumiri hwake.
Mwari ndiye Shoko, uye kuzadziswa kweMagwaro kunova kukudzwa kwake kukuru.
Johane 8:55 Hamuna kuvaziva semi, asi ini ndinovaziva; kana ini ndikati handivazivi, ndava murevi wenhema semi; asi ndinovaziva ini, ndinochengeta shoko ravo.
Humbowo hwekuziva Mwari raive simba raJesu rekuterera Magwaro nekuzadzisa Magwaro, kunyange zvakamutorera kurema kukuru.
Johane 8:56 Abrahama, baba venyu, vakafara, vachiti vachavona zuva rangu; vakarivona, vakafara
Abrahama aive asangana naJesu paaive Marekihezedeki.
Jesu aive azvisikira muviri wemunhu akura kuti agare maari paaitaura naAbrahama, pakutanga seMuprista Mukuru uyezve semuprofita, kuti azivise zvaizoitika kuSodoma uye kuzivisawo kuuya kwemwanakomana wechipikirwa, Isaka.
Uyu waive mucherechedzo wekuuya kweMwanakomana waAbrahama mukuru – Jesu.
Mupostora Pauro akati Merkihezedeki aive asina baba kana mai. Haana kuberekwa kana kufa.
VAHEBURU 7:3 Asinababa, asinamai, asinamadzisekuru, asina kutanga kwamazuva, kana kuguma kwovupenyu, asi wakafananidzwa noMwanakomana waMwari, unogara ari muPrista nokusingaperi.
Johane 8:57 Ipapo vaJuda vakati kwaari: Iwe ugere kusvika makore anamakumi mashanu, wakavona Abrahama here?
Asi airatidzika kunge aive nemakore makumi mashanu. Ndiko kubatira kwake kwaakaita Mwari panyama zvekuti aive atanga kuchembera.
Johane 8:58 Jesu akati kwavari: Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Abrahama asati avapo, ini ndiripo,
Kaini, mbeu yemhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka yekutanga akati “Ndiri muchengeti womunun’una wangu here?”
Izvi zvaive zvichipikisa zvakataurwa naMwari kuna Mosesi -- “Ndini Iye”.
Kaini akashandura zvakataurwa naMwari pamusoro pekuuraya munun’una wake.
Eksodo 3:14 Mwari akati kuna Mozisi, "NDICHAVA IYE WANDICHAVA." Akati, "Unoti kuvana vaIsiraeri, `NDICHAVA ndiye akandituma kwamuri.' "
“Ndichava Iye” Mwari asina nguva, ndiko kuzvizivisa kwakaita Mwari kuna Mosesi. Nekutaura kuti “Ndini Iye”, Jesu aizvidaidza kuti aive Mwari.
Kaini, pahuvepo hwaAbero aive mutsvene akava mhondi. Vatungamiri vezvitendero zvechiJuda, pavakanzwa kuti vaive vamire pamberi paMwari, vakava vaurayi. Kunzwa Shoko raMwari rechokwadi kwakavaita kuti vavenge Jesu nekuvenga kwemweya wakaipa. Vakamupomera kuti aive nemweya wakaipa, nekuti ivo pachavo vaive nemweya yakaipa.
Vaive vasika chimiro chechitendero chaive chava Mwari wavo. Kubva ipapo vakawana simba, kutonga uye mari. Vaida kwazvo zvinhu zvenyama nekukudzwa nembiri.
Saka pavakatarisana naMwari wechokwadi, maitiro avo akabva ava seaKaini akasarudzawo kuuraya munhu Abero aive nechokwadi.
Kuita kwavo kwakaratidza kuti vaive, saKaini, mbeu dzemhuka yakatukwa ikashanduka kuita nyoka sezvo vaikurudzirwa nekusatenda muchokwadi chaicho cheMagwaro. Vaitenda mavhesi aivaitira ivo (muti wekuziva zvakanaka) asi vakasarudza kuuraya Mumwe chete akavanongedzerera mavhesi avaisatenda maari (muti wekuziva zvakaipa).
Musanganiswa wechokwadi nenhema – rurimi rwenyoka rwakaita seforoko, runoburitsa chefu inouraya mumuromo mayo.
Johane 8:59 Vakanonga mabwe kuti vamutake nawo; asi Jesu wakazvivanza, akabuda mutembere.
Kwaive kusina kutongwa kwakaenzana. Asi vaive vatogadzirira kuuraya Jesu. Ndiko kwaive kuita kwekutsamwa kwavo kwehumhondi.
Zvakare Jesu akaratidzira simba rake rinoshamisa. Zvinoshamisa, akazvivanza akabuda nepakati peruzhinji rwaive ruzere kuvuraya mumoyo yarwo.
Izvi zvakaratidzira simba rake rekugona kufamba munzvimbo dzepamusoro.
Ngatiitei kunge pangori nemutsetse mumwechete mutema wenzvimbo (1-D) senzvimbo yedu. Munhu anoonekwa semutsetse mupfupi. Mumufananidzo wekutanga (1) munhu mutsvuku anotapwa pakati pemitsetse miviri yevanhu vebhuru otadza kupunyuka.
Kana munhu weruvara rutsvuku aine mukana wekupinda munzvimbo yepiri 2-D (nzvimbo yenyika yezvikamu zviviri zvepeji rakati sandarara) munhu ari muruvara rutsvuku anokwanisa kufamba achidarika munhu weruvara rwebhuru akatapwa pamutsetse.
Munhu weruvara rutsvuku anofunga pamusoro peizvi mumufananidzo wechipiri.
Mumufananidzo wechitatu munhu weruvara rwebhuru anoziva kuti munhu weruvara rutsvuku neimwe nzira amudarika akapunyuka, asi haana ruzivo kuti zvaitika sei.
Munhu weruvara rwebhuru haana mukana wekutaurirana nechimwe chinhu chisiri pamutsetse, mune imwe nzvimbo inotevera.
Simba rekupunyuka kana munhu akakombwa humbowo hwekuti munhu anobva kunzvimbo yepamusoro-soro.
Jesu akaratidzira kuti aive Mwari nekufamba munzvimbo dzepamusoro-soro dzemweya dzaisakwanisa kusvikwa nevatungamiri vechiJuda. Vaingoziva kuti neimwe nzira apunyuka kubva kwavari.
Vaive varamba kuti Mwari aive Baba vake. Asi Mwari ega ndiye anokwanisa kunyangarika nemunzvimbo yepamusoro-soro ozviratidza zvakare.